नेपाल अन्लाईन खबर : Samrat Bhattarai : नेपाल आमाको राष्टसेवक छोरा कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ र त गाउ शहर जिल्ला प्रदेश सबै उज्यालो छाएको छ , आउदो भदौमा उहाँको कार्य’काल सकिदैछ । त्येसैले सामाजिक सं’जालभरी पुन नि’युक्ति गर्नुपर्छ भनेर आम जनाताले माग उठाइरहेका छ्न ।
यो पनि पढ्ननुहोस ।
कुलमान घिसिङलाई हटाए सरकारले म’हङ्गो मुल्य चुकाउनु पर्नेछ : गंगा सुबेदि…हेर्नुहोस् ।
अचम्म छ मेरो देशको लिला जसले पटकपटक देश दो’हन गर्छ, उसले पटकपटक श’क्ति पाउछ, पद पाउछ, आमा ब’लत्कार गर्छ, तर त्यही ची’त्कार सुन्दैन । तर जसले देशको लागि, जनताको सिङ्गो जिन्दगी दाउ~मा राखि दिन्छ, उसैलाई पटकपटक नि’चोर्न खोजिन्छ, त्यही मध्येका एक पात्र कुलमान सर हुनुन्छ ।
कुलमान घिसिङ लाई पहीले नै निकाल्नु पर्ने थियो अलिक ढि`लो गर्यौ, उसलाई प्रधिकरबाट नि~काल्नु पर्छ किनभने , जब यो कुलमान नामको मान्छे आयो , उसले जल’स्रोतले सिंगो एसिया झलमल्ल बनाउने क्ष’मता भएको देशमा अ’धंकारमा टुकि,लाल्टिन,दियो बालेर रात दिन गु`जारा गर्ने नेपाल देशका नागरिकका लागि बत्ती दियो ,टुकी लाट्टिन,
म’ट्टीतेल बन्द भए ,जसबाट आउने कमि’सन ठ’प्प बनाई दियो , यसरी भ्रष्टहरुको आयस्रो’त ब’न्द गर्न कहा पाईन्छ कुलमान?वकुलमान नामको मान्छे प्र’धिकरणमा आउनु अगाडि,अत्यधिक बजेट जल’स्रोत,बि’द्धुत तिर थियो ,१८ घण्टा लो’डसेडिङ मिलाए, जसबाट तराई छेत्रका बासिन्दाले मोटर बाट पानी पाएनन् , खेती ठ’प्प भयो, भारत बाट किनेर खाए पछि कमिस’न नेताले भु’डि फु’टुन्जेल खान पाएका थियो ।
त्यो पनि बिजुली दियौं ब’न्द गरिदियौ तिनिहरुका आयस्रो’त यस्तो गर्न पाईन्छ कुलमान? करोडौं बार्षिक घा’टामा रहेको संस्थालाई नाफामा लग्यौ,भरपुर बिजुली उपलब्ध हुने क्र~म बढ्दै गएपछि , ग्यासको आयत , अन्न,जस्तो दैनिक उपभोग्य सामान भारत बाट कम आउन थाल्यो ,जसबाट कु`कुर हरुले गु खान पाएनन् , किन यस्तो गर्यौ !
तिमीलाई सरकारले समेत साथ दिएको छैन , पटकपटक प्र’चण्डले तिमीलाई निकाल्न खोज्दा खोज्दै किन अझ केही गर्छु भन्यौं ? बिजुली बाट चल्ने गाडि ,र स्टेसन किन सुरुवात गर्यौ? पे’ट्रोल र डिजेल बाट चल्ने सामान बाट अब नेताले कसरी क~मिसन खाने कुलमान? सम’ग्रमा तिमीले गरेको काम हेर्दा जनताको हित र नेताको कमाइ खाने भाडो बिप~रित छन् ।
तर तिमी हिम्मत नहार्नु कुलमान, नेपालको इतिहासमा पटकपटक इमान’दार मानिसको लागि जनताले र’गत दिएका छन्, तिमीले पनि पाउने छौ । पटकपटक प्रा’ण त्या’ग नहुन्जेलसम्म दोर्जे ह’रामी हरुले पद पढ्का’एर आफ्नो आमा लु’ट्न हुन्छ, भने तिमी जनताको लागि लड्ने मान्छेले , पुन समय अवधि थप गर्न किन मिल्दैन र? कुलमान जनताको हर मु’टुको धड्क’नमा बसेको नाम हो ।
त्यति सजिलोसँग जनताले मेटाउन दिदैनन्, बरु प्रा’ण फाक्छन्, हामीले धेरै हेर्नु छ तिम्रो पालामा, जथा’भावी टाँसिएको तार हरु जसमा भ’गंराले गु’ड लगाएको छन्, बि’श्वको सुन्दर देश नेपालको , प्रा’कृतिले मनमोहक दिए पनि ग’लत पा’त्रको का’रणले ध’मिलो बनाएको हर शहर, गल्ती , गाँस बेसि, हिमाल पहाड तराई सफा गर्नु छ ।
यस्तै यस्तै नयाँ र ताजा समाचारहरु पढ्नको लागि हामीलाई flow गर्नुहोस् ।
Previous आवाजबिहिनहरुको निम्ति राष्ट्रिय स्तरको मिडिया भन्दा सच्चा युट्युबरहरु अरबौं गुणा राम्रो हुन् :ज्वाला संग्रौला ,पढ्नुहोस !सहमत भए शेयर गर्नुहोस् ।
Next वरिष्ठ पत्रकार बिनोद त्रिपाठी भन्नुहुन्छ : सरकार कुलमान घिसिङको सक्रियता रहेसम्म उनले नै विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व लिइरहन पाउनैपर्छ…हेर्नुहोस् ।